Efa vita ny rary vato sy ny fanavaozana ny lalan-drano rehetra – FJKM Ambavahadimitafo Efa vita ny rary vato sy ny fanavaozana ny lalan-drano rehetra |
Efa vita ny rary vato sy ny fanavaozana ny lalan-drano rehetra
Jobily 150 taona.Vaovaom-piangonana
Mandroso tokoa ny asa fanavaozana ny Akany Ralibera Daniel, izay nosafidian’ny fiangonana ho tsangambaton-ny faha-150taonany ka isaorana ny Tompo izany.
Efa vita ny fanavaozana ny rary vato sy ny fanavaozana ny lalan-drano rehetra amin’izao fotoana izao, ka mankasitraka ny kristianina rehetra izay nanohana ny hezaka, kanefa mbola mitohy hatrany ny fandraisana ny ezaka avy amintsika eo an-tokon-tanin’ny fiangonana.
Misy moa ny karatra manga izay raisina eo an-tokontanim-piangonana, ahafahantsika mandray anjara amin’ny ezaka rary vato.
Rehefa nandinika tokoa mantsy ireo manam-pahaizana manokana amin’ny tao-trano, dia nahatsikaritra fa nitongilana ny Akany Ralibera Daniel, ka noho ny fikorianan’ny rano tsy ara-dalàna no nanetsika izany fototry ny akany izany. Izany indrindra no tsy maintsy nanavaozana na nanamafisana ny lalan-drano sy ny rary vato manodidina mba hifehezana ny rano avy any ambony toerana, mialohan’ny asa mahakasika ny trano rehetra.